Kaominina Ivato : Nahazo EPP ny fokontany Tanambao -
AccueilSongandinaKaominina Ivato : Nahazo EPP ny fokontany Tanambao
Kaominina Ivato : Nahazo EPP ny fokontany Tanambao
22/11/2017 admintriatra Songandina 0
Mitohy hatrany ny fananganana fotodrafitrasa amin’ireo fokontany mandrafitra ny kaominina Ivato. Taorian’ny fanamboarana lalankely, miainga indray ny fanamboarana sekoly amin’ireo fokontany manodidina.
Araka izany, dia notontosaina omaly ny ady fototrin’ ny EPP ao amin’ny fokontany Tanambao, izay ny Ben’ny tanàna Penjy Randrianarisoa sy ny ekipany no nanokatra ny asa tamin’izany. Voalaza àry fa hotanterahina ao anatin’ny telo volana ny fananganana ity EPP vaovao ao Tanambao ity. Raha ny mahakasika ny sekoly indray, dia ahitana efitrano fianarana miisa enina, ary mahazaka mpianatra hatrany amin’ny 240, izay mitsinjara ho roa miavaka tsara. Ny 120 amin’izy ireo dia mianatra ny tapak’andro maraina, ary ny 120 kosa tapak’andro hariva. Mpianatra miisa 24 isaka ny efitrano kosa no ampianarin’ny mpampianatra iray amin’ity sekoly vao atsangana ity.
Raha ny fampitam-baovao hatrany, dia mitentina 40 tapitrisa Ar kosa ny teti-bidin’ity fotodrafitrasa ho an’ny tontolon’ny fanabeazana ao amin’ny fokontany Tanambao ao amin’ny kaominina Ivato ity.
Nambaran’ny Ben’ny tanànan’Ivato, fa avy amin’ny hetram-bahoaka avokoa ny vola ampiasaina amin’ny fananganana fotodrafitrasa. “Rariny loatra raha averina amin’ny vahoaka izy ireny amin’ny alalan’ny fananganana sekoly toa izao”, hoy i Penjy Randrianarisoa. Na izany aza, hoy hatrany izy, dia miandrandra ny fanampian’ny malala tanana ihany koa ny kaominina tantaniny.
Voalaza fa manala fahasahiranana ireo ray aman-dreny amin’ny fampianarana ny zanany ny fisian’ny sekoly ao Tanambao, satria lavitra vao mahita sekolim-panjakana. Voalaza mantsy fa saika sekoly tsy miankina avokoa no misy ao amin’ity fokontany ity, ka maro ireo ray aman-dreny no tsy mahatakatra mampiana-janaka amin’izy ireny.
Nanamafy ny minisitry ny Angovo Lanto Rasoloelisoa, fa tsy hisy fiakarany ny vidin’ny herinaratry ny Jirama amin’ity taona ity. Ezahan’ny fitondram-panjakana ny mitazona ny vidin-jiro mba hanala ny fahasahiranan’ny vahoaka na dia mivarotra fatiantoka aza ...Tohiny
Dossier very : Nifanenjana Ravalomanana sy ny AV7